Forum serasera malagasy tsy (...) ho marina daoly zay ambarany - Dinika forum.serasera.org
tsy (...) ho marina daoly zay ambarany
Fitohizan'ny hafatra : tsy (...) ho marina daoly zay ambarany
Valiny : 106
rhaj0 - 09/01/2020 18:58
Tena mba reviko mihintsy io fantsin'i Gasy1zay io.
Voninahitra anie ho an'i Gasy1zay irery ihany
I pasitera mihintsy no notondroin'i Gasy1zay t@ io. Ary dia mazava ho azy fa mihatra @ Kristiana rehetra koa izany.
Koa izay "manambara" resaka avy @ baiboly izany, dia marina tokoa, fa "tsy (...) ho marina daoly zay ambarany".
Satria... na dia lazaina fa "Tenin'Andmntra" azany ny Baiboly, ka hoe, "izay voasoratra dia voasoratra", dia fantatra fa misy versions be dia be izy io, tsy @ dika-teny ihany, fa ny VOTOATIN-DRESAKA sasany mihintsy no novaina.
Dia tsy mila lazaina akoriny koa ilay lafiny "angano" @ ilay "tantara-angano"
Fa dia "tsy (...) ho marina daoly zay ambarany" HONO izany ee
gasy1zay - 09/01/2020 19:38
Zay ndray rhaj0 fa mandray antendrony, ny ambaran'ny pasitera hoa dia amariniko @ ny voasoratra anaty baiboly, rehefa mifanohitra amin'ny voasoratra dia tsy marina zany zay nambarany fa ny baiboly ihany no azo ekena
Ireto misy ohatra:
Nisy mpitoriteny nilaza fa izay nahazo ny FM hono dia tsy afaka manota intsony, diso zany satria i Petera aza diso teo anatrehan'ny galatiana, diso zany satria i Simona mpanao mazia fahiny efa nahazo FM nefa mbola saika hividy ny don de l'esprit ...
Nisy pasitera milaza fa blaspheme ny FM hono ny famerenana batisa, diso fa tsy misy izany ao anaty baiboly, ny misy ao dia efesiana natao batisa fanindroany satria batisa fibebahan'i Jaona no azony fa tsy batisa kristiana @ anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny FM
rhaj0 - 09/01/2020 21:06
Tena siora ve azany ianao ry Gasy1zay fa tsy nalainy, na ni-s'inspirer avy t@ Baiboly ilay Pasitera tondroinao eto? Ngo dia nisy dika-teny, na nisy toko aman'andininy TSY haiNAO Gasy1zay, fa tonga dia .. "mandray antendrony" ao ianao, @ (kely) fantatrao IRERY ao, dia manipaka na manebaka ny Pasitera?
Dia f'angaha koa moa, tsy toa anao Gasy1zay ihany, dia misy "manosika tsihaitsihay" izany mampiteny, ary I Jesosy io manosika io HONO.
Ka tsy mba voan'izany koa ve io Pasitera tebahinao io ry GAsy1zay? Dia raha voan'izany koa izy, dia sahinao ve ny manebaka ilay "mampiteny" azy, dia I Jesosy?
Izany hoe, tebahinao Gasy1zay ho diso izany I Jesosy ?
Tandremo ihany an
gasy1zay - 09/01/2020 22:01
Fa i rhaj0 zany tena tsy mbola naheno toriteny mintsy? Ny toriteny dia mamaky teny ilay mpitory dia avy eo manazava, ohatrany ny atao eto ihany e! Fa saingy @ fanazavana fa fampianarana ny teny mety misy diso satria misy interpretation indraindray fa tsy hoe voasoratra 100% ny ambara mandritra ny toriteny
gasy1zay - 09/01/2020 22:03
Raha tianao rhaj0 dia aleo hovaiko hoe tsy voatery mifanaraka amin'ny voalazan'ny baiboly daoly ny ambarany
rhaj0 - 10/01/2020 12:10
gasy1zay ... aleo hovaiko hoe tsy voatery mifanaraka amin'ny voalazan'ny baiboly daoly ny ambarany
Dia averiko indray:
Ngo dia nisy dika-teny, na nisy toko aman'andininy TSY haiNAO Gasy1zay, fa tonga dia .. "mandray antendrony" ao ianao, @ (kely) fantatrao IRERY ao, dia manipaka na manebaka ny Pasitera?
Satria mantsy io ilay fisainan'ny Baorina-againina toa an'i GAsy1zay. Tonga dia mitomppo-teny fantatra hoe, izy IRERY ihany no "mahay" (mamaky) Baiboly.
Dia pire, fa dia averiko indray koa:
Ka tsy mba voan'izany koa ve io Pasitera tebahinao io ry GAsy1zay?
Dia mbola io ilay fisainan'ny Baorina-againina toa an'i GAsy1zay. Tonga dia mitomppo-teny fantatra hoe, izy IRERY ihany no "mahay" (miresaka @) Jesosy.
Dia rehefa lazaina hoe, itony Baorina-Againina toa an-dry Gasy1zay itony no Itsimahalalaafatsynysaimpantany, dia hotry ny tena no Irainizailoza
gasy1zay - 10/01/2020 18:48
rhaj0> afaka mino izay maharesy lahatra anao ianao fa tsy maninona ka :D
rhaj0 - 10/01/2020 22:25
gasy1zay afaka mino izay maharesy lahatra anao ianao fa tsy maninona ka :D
Samia "mino izay maharesy lahatra azy" izany izy io, hozy Gasy1zay ee...
satria ny hafa, na pasitera na kristiana hafa, dia "tsy (...) ho marina daoly zay ambarany".
Ka raha "resy lahatra" ianao (tsy) mankany am-piangonana, na (tsy) manaraka Pasitera iray, dia .. "tsy maninona ka :D", hozy Gasy1zay ee..
Dia raha "resy lahatra" indray ianao ohatra hoe "sola fide", minou fotsy, baorina againina, dia "tsy maninona ka :D", hozy Gasy1zay ee..
Raha "resy lahatra" kosa ianao hoe, TSY minou fotsy izany, fa araho ny Didy 10 (sy Baiboly) sy ny dogma, dia "tsy maninona ka :D", hozy Gasy1zay ee..
Dia torak'izany hatrany. TSY voatery ho "marina" izay ifalianao ao, fa "tsy maninona" fa ifalio foana eee...
Satria tokoany mantsy... Izy ihany HONO no hahalala @ andro farany.
Ka dia samia fotsiny manao izay saim-pantany izany eee... fa "tsy maninona ka :D", hozy Gasy1zay ee.. "TSisy bedy" daholo izany izany.
bravo!... bravo Gasy1zay
Voninahitra anie ho anao ry Gasy1zay
RBNIR - 13/01/2020 12:35
Izao no tenin'i paoly apostoly....« Raha izaho ary, dia mihazakazaka, nefa tsy toy ny manao kitoatoa; ary mamely totohondry aho, nefa tsy toy ny mamely ny rivotra; » (1 Korintiana 9:26)
Tsy azo atao kitoatoa ilay fivavahana...
Hoy koa i Jaona hoe : « Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. » (Jaona 4:24)
Izay mivavaka amin'Andriamanitra hoy i Jaona dia "tsy maintsy" (impératif) amin'ny fanahy sy NY FAHAMARINANA....
Ka tokony fantarina tsara izay tena marina fa tsy mety ny manao kitoatoa.....
rhaj0 - 13/01/2020 14:23
RBNIR ... "tsy maintsy" (impératif) amin'ny fanahy sy NY FAHAMARINANA....
Ka zovy moa ianao ry RBNIR no ahalala fa tena ilay "ny fanahy sy NY FAHAMARINANA" no ivavahanao ao io?
Averina indray ity Sary ity. Ahoana moa no ahafantaranao, t@ zareo "nivavaka" mafy, ary tena nivavaka t@ fony tao, fa TSY t@ izao "ny fanahy sy NY FAHAMARINANA" izao no nivavahany?
Rahefa nitsefotra ny baolina, efa lasan'ny kivindro ny taolana, ary izany dia sirika be ATY AORIANA, izay ianao RBNIR vao mandatsa hoe, ka TSY "ny fanahy sy NY FAHAMARINANA", ilay tena izy, no nivavahan-dreo.
Ary fantaro ary aza adino mandrakizay koa, fa TOA IZAY ihany ianao ry RBNIR. Araka ny filazan'i Gasy1zay azy izay hoe, "tsy (...) ho marina daoly zay ambarany", ary hita mazavabe, fa na dia nivavaka tahak'n'inona azany ianao RBNIR na rizareo Deba be io ambony io, dia TSY "ny fanahy sy NY FAHAMARINANA" no nivavahanareo tao.
Koa aoka kely TSY ho savisavihanao RBNIR foana INTSONY izao "ny fanahy sy NY FAHAMARINANA" fa manjary I Jesosy no afa-baraka.
RBNIR - 13/01/2020 22:17
Ny hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia izao:
Fanazavana araka ny baiboly ity mazava loatra:
1 mivavaka amin'ny fanahy:
efa nazavaina teto fa = olombelona = aina+vatana+fanahy araka ity toko sy andininy ity....
1 Tesaloniana 5:23
Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin'ny fihavian'i Jesosy Kristy Tompontsika.
raha aina sy vatana fotsiny dia mitovy amin'ny biby ny olona (mpitoriteny 3:18)
ny fanahy no mahaolona.....
rehefa Andriamanitra no mijery dia mahita karazan'olona 2 Izy:
karazany voalohany olon'ny nofo (aina+vatana) fotsiny ihany, ireny olona ireny dia nanao tsinotsinona ny momba ny fanahiny ary tsy mahalala afatsy ny vatany (nofo) fotsiny ihany..Ireny ireo ambaran'i jesosy hoe maty (fanahy) ato amin'ity teny ity. aleo ny maty handevina ny maty ao aminy(....aoka ny maty handevina ny maty ao aminy (mat.8:22) tsy hoe maty no handeha hifandevina fa ireo maty fanahy no tian'i jesosy ambara eo....
karazany faharoa kosa dia ireo olona mitsinjo ny fanahiny ka manaiky ho tarihin'ny Fanahy fa tsy ny nofony...
17 Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanaroeo manao izay zavatra tianareo.
18 Fa raha tarihin'ny Fanahy ianareo, dia tsy mba ambanin'ny lalàna.
ireny olona ireny dia homena fanahy vaovao (ho solon'ilay fanahy maty teo aloha) Eze.36:26 ka ireny no manana fanahy velona ao anatiny...
Ireto sokajy faharoa ireto no lazain'Andriamanitra hoe mivavaka amin'ny fanahy (manana fanahy vaovao velona ao anatiny solon'ilay fanahy maty teo aloha) manaiky ho tarihin'ny Fanahy Masina ka dia handeha araka ny lalàn'i jehovah Eze.36:27
2 mivavaka amin'ny fahamarinana:
Inona no atao hoe fahamarinana?
Fahamarinana = tenin'Andriamanitra...
Mivavaka amin'ny fahamarinana = tsy mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra...
9 Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy (Isa. 29. 13).
Mivavaka amin'ny fahamarinana = mivavaka araka ny tenin'Andriamanitra 100% tsy hanampiana sady tsy analana
2 Aza ampianareo ny teny izay andidiako anareo, ary aza anesoranareo, fa tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitrareo izay andidiako anareo.
ireo no atao hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana...
rhaj0 - 14/01/2020 21:25
Dia ianao RBNIR sy HRNRN ihany izany no tena mahay azy an...
Sa ... nanao araka ny fahaizanao RBNIR io ambony io koa ry Tony sy George ary Hillary sy Theresa @ ireo kabariny napoakapoakany ireo??
RBNIR - 15/01/2020 06:06
Ampianarina ny tsi11 io rhajo a! izay mahatsapa ny fahamarinany afaka mampihatra izany ho an'ny tenany....
rhaj0 - 15/01/2020 14:02
ka dia TSY nanao araka ny fahaizanao RBNIR izany hono, hozy I RBNIR, ry Tony sy George ary Hillary sy Theresa, ary dia ireo niteniteny foana ireo, nisavisavika ny anaran'Andmntra, ary nanala-baraka an'i JEsosy.
Izay izy io ry RBNIR an?...
RBNIR - 15/01/2020 14:12
marina ilay hoe nanalabaraka an'i Jesosy, nefa raha hibebaka moa izy??? mbola tsy tara ange e!
Ianao koa mbola tsy tara raha izao vao tonga saina...
rhaj0 - 15/01/2020 14:15
ka efa nibebabebaka tahak'n'inona anie zareo ireo TALOHAN'NY nitenenany t@ "feo mafy" ireo hadalana manala-baraka Jesosy beuh ireo ee...
Fa dia ataovy ihany ry RBNIR ny mitsaratsara olona aaa... manan-jo ny hitsaratsara tokoa moa ianao, dia lazaovy fa TSY mahay "mivavaka" ny olona, TSY "nibebaka", fa mila ny fampianarana ataon'i HRNRN vao avotra..
rhaj0 - 15/01/2020 18:59
Tena manja mihintsy ny resaka eto, fa ity vao mainka fatratra
RBNIR Ary malalaka tsara ny safidy tsy misy hoe tsy maintsy izao na tsy maintsy izao....
Koa na hozy hono ny baiboly hoe, "AZA manao an'izao", dia io no valin-tenin'i RBNIR: malalaka tsara ny safidy tsy misy hoe tsy maintsy izao na tsy maintsy izao
Bravo RBNIR.. Voninahitra koa anie ho anao RBNIR, miaraka @ Gasy1zay io ambany io
RBNIR - 15/01/2020 21:42
eo amin'ilay hoe manambady sy tsy manambady no nomena safidy malalaka ny olona...
io tsy midika hoe afaka hitarina any amin'ny lalàna hafa ilay resaka...satria eo ihany no nampisafidianana malalaka ny olona;
rhaj0 - 15/01/2020 21:59
Ny Didy 10 koa dia mirafitra toa io Korintiana io.
AZA manao an'izao sy izao.
Sa tsy mb(ol)a namaky Didy 10 I RBNIR?
Raha ny izy anefa, dia eny, "amena safidy malalaka raolona" HONO.
Sirika be indray I RBNIR fa TSY mahay kristianisma, nefa I RBNIR be dedadedaka hoe, bitsihin'i Jesosy HONO.
Esy e ry RBNIR... mivaralila ve ry RBNIR aaa...
TSy I Jesosy kosa k'lou no mivaralila.. Fa dia aza savisavihanao ho'a ny anaran'i JEsosy ry RBNIR, dia lainganao hoe, I JEsosy mihintsy no miresaka aminao RBNIR ao, ka niteny ireo hadalana resahinao io ambony eo io.
RBNIR - 16/01/2020 06:25
tsy mitovy mihitsy an...Vakio ato ny dikanteny frantsay sy angilisy hanampy anao...